Nzira yekusarudza sei kubva kutsvaga injini pakapakiti?
Mazuva ano, kune zvakawanda uye zvinowedzera kutsvaga injini yekugadziriswa kwevashandi vanoonekwa munyika yose. Vamwe vavo vanokwezva vadzidzisi vepawebsite nemitengo inodhura, asi vamwe vanopa mari inodhura asi inoenderana nekugadzirwa kwepamusoro. Saka, inova chinhu chinonyangadza kuwana sangano rakanaka reSeO pakati pezana remakumi ezviuru zvezvimwe, kunyanya kana iwe usati wamboshandisa maitiro ekufambisa mberi. Seo peo mapeji angave akasiyana zvakasiyana kubva kune mumwe nemumwe, iwe unoda kutora nguva yekukanda mune optimization huduma dzakasiyana-siyana masangano anopa.
Kutsvaga injini yekugadzirisa kwakave chikamu chinokosha chekutengeserana kwebhizimusi. Kunyangwe iwe uchida kuvaka kambani webhusaiti yekambani kana guru guru rekushandisa webhu, unoda SEO services sezvo inoita kuti bhizinesi rako rekuInternet rionekwe paSERP uye kukoshesa vashandi vako vanogona. Kushandisa injini yekutsvaga kukwanisa kugadzirisa kunobatsira zvakakwana pakudzoka kwako pane utsvaga. Zvisinei, kuvaka svondo rinobudirira SEO, unofanirwa kusarudza zvakanaka SEO purogiramu. Iyi purogiramu haifaniri kungokubatsira iwe kuti ukweve nzira yakatarwa kune yako yepaiti asiwo unosangana nezvinodiwa zvebhizimisi rako. Chokwadi chinotaurirwa, haisi basa rakasarudzwa kusarudza pane yakakodzera SEO. Zvisinei, kune zvinhu zvakawanda zvaunogona kuita kuti uone kuti iwe unopedzisa nekanakisisa yekutsvaga injini pakushandisa pabasa rako rekutsvaga.
Mhando dzakasiyana dzeSeO pakapatari
Mapapiro anopiwa neEO mapurisa anogona kugoverwa kuva maviri maitiro ezvinyorwa.
Nhamba yepamusoro ye SEO purogiramu inowanzobatanidza maitiro ekutanga eSOO mazano uye maitiro akadai sokutsvakurudza kwemashoko makuru, kunyora zvinyorwa, webhumo mukati mekugadzirisa nekugadzirisa uye kusimbisa chikwata. Icho chinoreva kuti iyi purafura inongobatanidzwa chete kudikanwa kwehutanho hwekugadzirisa hutano hunogona kuvandudza kushandiswa kwako kwebhizimisi kuIndaneti. Iko muwandu we SEO purogiramu inowanzova nemutengo usingakwanisi sezvo usingatsvaki chero humwe huwandu hwekugadzirisa zvitubu uye hunogona kuitwa neumwe SEO nyanzvi. Izvo zvikwata zve SEO mapeji zvinonakidza kune ichangobva kutangwa mawebsite. Nhau yekutanga iyo vashandi vebhishopi vanotarisana nekuraira muongorori weSeO wepakati haisi yose inopiwa maitiro ekugadzirisa anodiwa pamushandirapamwe wavo wokutsvaga. Uyezve, hapana mukana wekushandura mazano aya neavo anodiwa kana kuti usabhadhara ivo zvachose. Sezvo zvisinganzwisisi kubhadhara kusina basa nekuda kwebasa rako rewebsite, vatengesi vakawanda vari muIndaneti vanotaura pane zvakagadzirirwa SEO pepa.
Purogiramu yakagadzirirwa SEO inopa vadzidzisi webhusaiti nemishando inonyanya kugadzirirwa mabhizinesi avo. Hapana mabasa asina maturo aunoda kubhadhara. Pasinei nokuti mari inoshandiswa pamitambo yakatarwa yakakura kupfuura yevashandi vese, ichiri chisarudzo chakanaka chekuisa mari mairi. Sezvo rudzi urwu rwe SEO pakagadzirwa hunoenderana nezvinodiwa zvakasiyana-siyana zvebhizimisi rako, zvipimo zvako zvichabhadharwa mu spades. Kugadziriswa kwekutsvaga injini yekugadziriswa maitiro kunowanzobatanidza kuongorora marusi niche, makwikwi ekutsvakurudza uye mamwe maitiro anobatsira ekugadzirisa maitiro ayo anogona kuvandudza purogiramu yako yebhizimisi iripo uye kusimudza nzvimbo yekutendeuka. Izvo zvakagadziriswa yekutsvaga injini yekugadzirisa maidiki zvinoda sangano rezvenzvi ndicho chikonzero mari yavo inogona kuva yakakwirira kudarika yevhareji.
Saka, paunosarudza kuti SEO purogiramu yaunofanira kushandisa, unofanirwa kuve nechokwadi kuti uri kuwana hutano hwehutano hwebhizimisi rako rekutsvaga rekutsvaga.Iva nechokwadi chekuti SEO purogiramu yaunosarudza iine marangariro ako emusika, ruzivo rwekutsvakurudza, ruzivo rwekugadzirisa zvinyorwa, kuiswa kwekutsvaga, webhusaiti mukati mukati mekugadzirwa kwehutano, interlinking, metadata ekugadziriswa.
Chii chaunoda kutsvaga mu SEO pato?
Kutenga zvakagadzirirwa zvakakwana zvakakodzerwa nebhizimisi rako rinodiwa SEO purogiramu inowanzoita mari inoshanda-uye inoshanda nguva yekushandura webhusaiti. Ngatitaurei zvakajeka zvamunoda kutsvaga mune yekutsvaga engine optimization purogiramu kuti mugamuchire zvakanaka SEO chikonzero.
site architecture. Iko yehutano yekuongorora ichabatsira SEO nyanzvi kuwana uye kubvisa zvikanganiso mu HTML code. Zvakare, kubvunzurudzwa kwakadzika kunosanganisira zvose pa-ne-off-site zvinhu zvekuongorora kuve nechokwadi kuti hapana mazano ehupirisiti akaparadzanisa nzvimbo yako kubva kuGoogle TOP.
Keyword suggestion inonyanya chikamu che SEO purogiramu sezvo inoshanda sechikamu chekutanga chebasa rekugadzira webhusaiti. Sezvo mutemo, kutsvaga injini yekugadzirisa nyanzvi inopa vashandi vavo necheti yepamusoro-volume kutsvaga mazwi ayo anoshanda seOO achatsvaga. Mumwe nyanzvi SEO muongorori anofanirwa kushandisa nhamba yezvishandiso kuti aongorore kukosha kwemashoko makuru akasarudzwa uye awane urongwa hwemashoko makuru epamusoro ekutsvaga huwandu hwekutengesa kune yako nzvimbo.
. Nhamba yehutano hwakakosha uye hwehutano hunoisa panzvimbo yako yekutsvaga tsvaga nzvimbo yako yepamusoro uye mukurumbira mumaziso ezvinjini. A SEO yakanaka kambani inofanira kubvumirana nemitambo yakasiyana yewebhu uye nzvimbo dzekutsvaga kupa vashandi vavo nhamba yehutano uye zvakakosha kumashure. Kambani yakazara yemakambani yedhigirii inogona kukupa mazano ekuvakira mazano sechikamu cheEOO purogiramu yakawanda uye inokupai mazano anotevera ekugadzira maitiro: kutsvaga niche yemakambani, kukwikwidzana kwekambani yekuongorora maitiro, kuendesa mauri webhu yako kune zvakakosha uye zvinyorwa zvemasimba, kunyora guest blog zvigaro uye kusika unhu uye zvikamu zvakasiyana.
Kugadzirwa kwezvinhu zvinogona kuiswawo mune zvose zviripo uye zvakagadzirirwa SEO mapeji kana muongorori weSeO anofunga kuti zvigadziro zvewebhu yewebhu zvinoda kuvandudzwa kana kuti inofanira kunyorwazve. Kuita zvinhu zvakagadziridzwa ndezvenguva inopedza uye inorwadza nzira ndiyo chikonzero ichi chekugadzirisa zvinogona kuve zvakadhura Source .